‘हामीलाई आफ्नै सपनाले तर्साउँछन्’- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
‘हामीलाई आफ्नै सपनाले तर्साउँछन्’
दाङ — कुनै बेला आफू संलग्न माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अहिले कस्तो लाग्छ ? घाइते र अपांगता भएका माओवादी लडाकु भन्छन्, ‘नेताहरुले सपना देखाए, हामी ज्यानको मतलब नगरी लड्यौं, अहिले हामीलाई तिनै सपनाले तर्साउँछन् ।’
छेउमै पातुखोला गडगडाउँदै बग्छ । वर्षायाम सुरु भो कि कतिबेला खोलामा परिएला भन्ने पिरलो । स्वर्णिमकुमार बाँठा त्यही खोला किनारमा बसेर विगत सम्झन्छन् र अहिलेको आफ्नै जीवनसँग दाँज्छन् । कुनै बेला छातीमा गोली थाप्न तयार हुने उनको ज्यान अहिले पानी पर्दा डराउँछ ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा दुवै आँखाको ज्योति गुमाएका सल्यानका लालबहादुर वली यसको कारण छ, माओवादीको दशक लामो विद्रोहको भुक्तमान बेहोरेका पात्र हुन् उनी । घर, परिवार छाडेर होमिएका बाँठासँग विद्रोह समाप्तिपछि आफ्नो भन्ने केही बाँकी रहेन ।
द्वन्द्व सकिँदा नसकिँदै नेताहरू सहर छिरेर ठूलठूला पदमा पुगिसकेका थिए तर उनीसँग साथीभाइ थिए न त आफन्त । शान्ति प्रक्रियाका नाममा ६ वर्ष क्यान्टोनमेन्ट (लडाकु शिविर) मा बसे । त्यहाँबाट बाहिरिँदा बुझेको ५ लाख र त्यसमा श्रीमतीको ५ लाख रुपैयाँसमेत थपेर पातुखोला किनारमा घडेरी किने ।
ऐलानी जग्गा भएकाले धनीमा उनको नाम हुँदैनथ्यो । त्यहीँ एक तलाको घर बनाए । अहिले पनि जब पातुखोला गडगडाउँछ, उनका मनमा त्यसै त्यसै ढ्यांग्रो ठोक्न थाल्छ ।
प्रकाशित : पुस २१, २०७७ १७:४०
प्रदेशसभा विघटन हुँदैनन्, प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यता : मुख्यमन्त्री गुरुङ
काठमाडौँ — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशसभा विघटन हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘सबै प्रदेशसँग राय लिनुपर्‍यो ? मुख्यमन्त्रीहरुको धारण के छ ? यसै प्रदेशसभा विघटन हुन्छ ?’ उनले प्रतिनिधिसभा विघटन रहरभन्दा पनि बाध्यताले गर्नुपरेको बताए ।
मंगलबार सुरु भएको विशेष अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले ६४ प्रतिशत जनमत प्राप्त दलको नेताले आफ्नै पार्टीको खिचातानीले संसद विघटन गर्न बाध्य हुनुपरेको बताए । विगतको इतिहासमा राजा महेन्द्र शाह, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीले पनि आफ्नै पार्टीको किचलोका कारण संसद विघटन गरेको इतिहास हुँदाहुँदै आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो इतिहास दोहोर्‍याएको उनको भनाइ थियो । उनले गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिलाई राजाको उपनाम दिनु र विरोध गर्नु भनेको गणतन्त्र कमजोर बनाउन खोजिएको आरोप लगाए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जनताको समस्या उजागर गर्ने ठाउँ संसद भएकाले विशेष अधिवेशनको माग गरिएको बताए । कोभिडग्रस्त बनाएको प्रदेशलाई कसरी उजागर गर्ने भनेर सरकारलाई विज्ञप्ति, मौखिम रुपमा डेलिकेसन गरिरहँदा सुनुवाइ नभएपछि अधिवेशनको माग गरिएको उनले बताए । ‘सरकारले हुँदैन भन्दैन तर, गर्दैन पनि’ उनले भने, ‘यसरी कसरी जनताको समस्या हल हुन्छ ? यस अवधिमा जनताको हकहित र अधिकारको विषयमा मात्रै सम्बोधन हुनेछ ।’ सरकार कानुन निर्माणमा अघि भए पनि कार्यान्वयनमा पछि रहेको उनको धारणा थियो ।
यसैगरी जनमोर्चाका कृष्ण थापाले दुई तिहाई सरकारले ५ वर्ष सरकार चलाउँला भनेर जनमत दिँदा पनि पूरा समय सरकार चलाउन नसकेको बताए । शक्ति र स्वार्थको लागि संसद् विघटन गर्नु गलत रहेको उनले बताए । सरकारले जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन नसकेको समाजवादीका हरिशरण आचार्यले बताए । एउटा जिल्लामा खानेपानी पूर्ण गर्न नसक्ने सरकारसँग खासै अपेक्षा राख्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
प्रकाशित : पुस २१, २०७७ १७:२१